५२ अर्बको कालो धन प्रकरण : को-को तानिँदैछन् छानबिनमा ? - नेपाल समय
५२ अर्बको कालो धन प्रकरण : को-को तानिँदैछन् छानबिनमा ?
काठमाडौं- नेपालका विभिन्न व्यक्तित्वले स्विस बैंकमा राखेको ५२ अर्ब सात करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अवैध धनबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अध्ययन सुरु गरेको छ।
विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले घटना बाहिर आएसँगै अनुसन्धान सुरु गरेको बताए। 'विभागले मुलुकको ऐनकानुनमा टेकेर अनुसन्धान सुरु गर्नेछ,' उनले भने, 'सरकारले कूटनीतिक संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको सहयोगमा अनुसन्धान अघि बढाउनेछ।'
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) को टिमले खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र 'दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टस्' (आइसिआइजे) ले नेपालीले ५२ अर्ब सात करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) अवैध धन 'ट्याक्स हेवन' (कर छलीका लागि अनुकूल देश) स्विट्जरल्यान्डको स्विस बैंकमा जम्मा गरेको खुलासा गरेको थियो। साथै 'विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने' कानुनी व्यवस्थाविपरीत ५५ नेपालीको विभिन्न देशमा लगानी गरेको समेत सार्वजनिक भएको हो।
विभागका सूचना अधिकारी लामिछानेले एक अर्का देशबीचको आपसी कानुन सहयोगका सम्बन्धी विषय कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्छ भने वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयु) नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीमा रहेको छ । त्यसैले यी दुई विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरुले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको जानकारी उनले दिए ।
विभागले पनि आवश्यक कानुन र विधिअनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । 'सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिनमा कुनै निश्चित म्याद हुँदैन,' उनले भने, 'जतिखेर प्रमाण भेटिन्छ मुद्दा चल्छ।'
माघ ४ गते संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसदको प्रश्नको उत्तर दिँदै नेपालीले स्विस बैंकमा अवैध रूपमा रकम जम्मा गरेको विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताएका थिए। 'त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइनेछ', प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, 'विदेशमा गैरकानुनी धन राख्न कानुनले दिँदैन। यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं।'
कसरी पुग्यो स्विस बैंकमा ५२ अर्ब
आइसिआइजेको सन् २००६/०७ को विवरणमा स्विस बैंकमा नेपालीको सात अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख थियो । सन् २०१७ मा स्विस बैंकले नै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार त्यहाँ नेपालीले राख्ने र झिक्ने गरेको रकम आधा खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ।
माओवादी द्वन्द्वसँगै रकम जम्मा
सन् २०५२ सालदेखि नेपालीले स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको आइसिआइजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्विस नेसनल बैंकले २०१७ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पहिलो वर्ष एक करोड १० लाख ४२ हजार स्विस फ्र्यांक अर्थात् एक अर्ब २४ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बचत भएको थियो।
द्वन्द्वकालको १० वर्षे अवधिमा नेपालीले २४ करोड दुई लाख ७२ हजार स्विस फ्र्यांक (२७ अर्ब १५ करोड सात लाख ३६ हजार रुपैयाँ) स्विस बैंकमा जम्मा भएको जनाइएको छ।
एकै वर्षमा चार अर्ब जम्मा
द्वन्द्व सकिएपछिका दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम बचत भएको आइसिआइजे जनाएको छ। सन् २००६ अर्थात् २०६३ सालमा मात्रै तीन करोड ६७ लाख २७ हजार स्विस फ्र्यांक (चार अर्ब १५ करोड एक लाख ५१ हजार रुपैयाँ) बचत गरेका छन्। सन् २००७ मा तीन करोड ४५ लाख १० स्विस फ्र्यांक (तीन अर्ब ८९ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ) बचत गरेका छन्।
को हुन् बढी रकम जम्मा गर्ने महिला?
आइसिआइजेका अनुसार बानेश्वर गंगादेवी टोल ठेगाना उल्लेख गर्ने मिनु शाह छिब्बर परिवारको मात्रै स्विस बैंकमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। लन्डनमा बस्दै आएकी नेपाली नागरिक मिनु र उनका दुुई छोराका नाममा सबैभन्दा बढी रकम स्विस बैंकमा जम्मा भएको बताइएको छ।
नेपाल आउजाउ गरिरहने मिनुले भारतीय नागरिक सिर्वतेरा प्रकाश (एसपी) छिब्बरसँग विवाह गरेकी थिइन्। कागजातबाट एसपी छिब्बरको सन् २००३ मा निधन भएको आइसिआइजेले जनाएको छ।
प्राध्यापकदेखि सांसदसम्मको विदेशमा लगानी
'विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने' कानुनी व्यवस्थाविपरीत ५५ नेपालीको विभिन्न देशमा लगानी रहेको छ। यस्तो लगानी गर्नेमा प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्वसांसद, नेता र समाजमा नामै नसुनिएका व्यक्ति परेका छन्। नेपालमा २०२१ मा अर्थात् ५४ वर्षअघि 'नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन' बनेको थियो। तर त्यसको धज्जी उडाउने लगानी गरिएको छ। गैरकानुनी लगानीमा व्यवसायी मात्रै हैन एक डाक्टर र एक प्राध्यापक पनि जोडिएका छन्। डाक्टर श्यामबहादुर कर्माचार्य र प्रोफेसर शतेन्द्र गुप्ताले ट्याक्स हेवनमा लगानी गरेको देखिन्छ।
आइसिआइजको अनुसार बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट विज्ञ डा. श्यामबहादुर कर्माचार्यले ललितपुर–महानगरपालिका २ ठेगाना उल्लेख गरी २००८ मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्मा सर्जी इलेक्ट्रो मेडिका कम्पनी दर्ता गरेका हुन्।
प्रोफेसर गुप्ताले सन् २००४ मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्मा 'वोन्का इन्टरनेसनल इन्क' कम्पनी दर्ता गरेका छन्। सो कम्पनीमा युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका १२ जना डाक्टर र प्रोफेसरको लगानी छ।
यी हुन् विदेशमा शंकास्पद लागानीकर्ता
विदेशमा लगानी गर्नेमा नेपालमा नाम चलेका प्रतिष्ठित उद्योगी र व्यवसायीदेखि नामै नसुनिएका पनि छन्। केहीको ठेगाना खुले पनि कतिको खुल्न सकेको छैन। नेपालमै व्यवसाय गर्ने तर गैरआवासीय नेपालीको पहिचान बनाएका कतिपयले 'ट्याक्स हेवन' (कर छलीका लागि अनुकूल देश) मुलुकमा लगानी गरेको भेटिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनले रोक नलगाए तापनि ट्याक्स हेवन मुलुकमा कम्पनी खोलेकाले लगानीको त्यो स्रोतमाथि शंका उब्जेको हो।
पूर्वसांसद वीरेन्द्र महतो
संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वसांसद वीरेन्द्र महतोको बेलारुसमा 'ओजेएससी एम्कोडोर होल्डिङ लिमिटेड कम्पनी' मा लगानी छ। चारजना लगानीकर्ता रहेको एम्कोडोरका साझेदारमा गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठ, वीरेन्द्रका दाइ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो र उनका विदेशी साझेदार रोमियो अब्दो रहेको आइसिआइजेले जनाएको छ।
अब्दोसँग नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो कर छली प्रकरण एनसेलमा पनि जोडिन्छ। एनसेल बिक्री प्रकरणमा झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ (हाल ७२ अर्ब पुगिसक्यो) कर छली गरेर बाहिरिएको छ। उनले टेलियासोनेराका तर्फबाट एनसेलमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। टेलियासोनेराले नेपालको एनसेल कम्पनीमा लगानी गरिरहेका बेला उनी अध्यक्ष थिए।
उपेन्द्र, समता अनि निरज
सन् २०१५ मा आइसिआइजेको 'पनामा पेपर्स' खुलासामा उपेन्द्र महतोका नाममा 'ट्याक्स हेवन' मुलुकमा कम्पनी रहेको उल्लेख थियो।
प्राप्त गरेका कागजातले महतो, उनकी पत्नी समता र उनका साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस, साइप्रस, बेलारुस, बेलायत र भारतमा लगानी रहेको देखाउँछ। उनीहरूमध्ये कुनै दुई वा तीनैका नाममा रहेका कम्पनीहरूमा स्पार्टली भेन्चर, पंकुर फाइनान्स, टिपोलोजिया, मनिस्टार, एम्कोडोर, बिएन्डके, यज्ञदिप, युमी नेपाल अर्थक्वेक, नोष्टल बिजनेश कर्व, मावेल एपरेल, युमि अपिल नेपाल अर्थ क्वेकलगायत रहेको आइसिआइजेले जनाएको छ।
व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको पनि विदेशमा लगानी रहेको भेटिएको छ। आइसिआइजेसँग आबद्ध साइप्रसका खोज पत्रकार स्तेलियोस ओरफानिदेशले ट्याक्स हेवन मुलुक साइप्रसको 'डिपार्टमेन्ट अफ रजिस्ट्रार अफ कम्पनिज एन्ड अफिसियल रिसिभर' का विवरण खोपकेलाई उपलब्ध गराएका थिए। ती दस्ताबेजअनुसार सुमार्गीले साइप्रसको एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेड कम्पनीमा लगानी गरेका छन्।
साइप्रसस्थित म्याग्नम हाउस ठेगाना उल्लेख गरिएको र हालसम्म पनि सक्रिय यो कम्पनी सन् २००८ मा खोलिएको हो। 'म्याग्नमसर्भ सेक्रेटरी लिमिटेड' नामक ल फर्मले दर्ता गराइदिएको एयरबेलका लगानीकर्तामा अजयराज सुमार्गी पराजुली, नेपालस्थित सुमार्गीको कम्पनी मुक्तिश्री प्रालिमा काम गर्ने अर्जुन शर्मा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्को जोधार इन्भेस्टमेन्टस प्रालि र अरू १२ जना विदेशी नागरिक रहेको आइसिआइजेले जनाएको छ। सुमार्गीको ठेगाना हेटौंडा–५ मकवानपुर नेपाल भने शर्माको कमलादी काठमाडौं–२ उल्लेख भएको बताइएको छ।
सुमार्गी र शर्माले विदेशमा लगानी गरेर कानुनको स्पष्ट उल्लंघन गर्नुका साथै नेपालका सरकारी निकायसँग अनुमति नलिई विदेशी लगानीका नाममा विदेशको आफ्नै कम्पनीबाट नेपालमा रकम भित्र्याएको छ।
यसअघि सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार उनीहरूले नेपालका सरकारी निकायसँग अनुमति नलिई विदेशी लगानीका नाममा आफ्नै एयरबेल कम्पनीबाट रकम भित्र्याइएको छ। सन् २००८ देखि २०१३ सम्ममा सुमार्गीले नौपटक गरेर ६ करोड ३१ लाख ८५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर (६ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ५३ हजार ३५५ रुपैयाँ) एयरबेलबाट आफ्नै नेपाली कम्पनीमा भित्र्याएको आइसिआइजेले जनाएको छ।
चौधरी परिवार चारजनाको लगानी
चौधरी परिवारका चारजनाका नाममा विदेशमा लगानी रहेको भेटिएको छ। जसमा अरुणकुमार चौधरी र उनकी पत्नी शिला, छोरा करण र सुुर्भान्सको नाममा ट्याक्स हेवन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्मा अर्सिन लिमिटेड कम्पनी दर्ता छ। आइसिआइजेका अनुसार सन् २००४ मा दर्ता भएको उक्त कम्पनीको नेपालको ठेगाना सरस्वती सदन, ठमेल उल्लेख छ।
अर्को ट्याक्स हेवन टापु गर्नजीमा दर्ता रहेका दुुई विदेशी कम्पनी साझेदार छन्। टेन्बी नोमिनिज लिमिटेड र ब्रोक नोमिनिज लिमिटेड चौधरीका साझेदार कम्पनी हुन्। टेन्बी र ब्रोक कम्पनीमा को–को सेयर होल्डर छन् भन्ने खुल्न सकेको छैन।
राजेन्द्रकुमार काब्रा र उनकी पत्नी रेखा काब्रा विदेशमा लगानी गर्ने अर्को परिवार हो। उनीहरूले एउटै कम्पनीमा लगानी गरेको खुलासा छ।
शुक्रपथ काठमाडौं ठेगाना उल्लेख उनीहरूले सन् २००९ मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्मा फ्रेगे्रन्स टाउन लिमिटेड नामक कम्पनी दर्ता गरेका हुन्। कम्पनी रजिसट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरका अनुसार राजेन्द्र काब्रा भृकुटी कागज उद्योगका लगानीकर्तामध्ये एक हुन्।
नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा पराजित राजेन्द्र बजगाईको पनि विदेशमा लगानी रहेको देखिन्छ। बेलायतको कम्पनी रजिस्ट्रेसन कार्यालय 'कम्पनिज हाउस' का अनुसार बजगाईले सन् २००४ मा लन्डनमा गोरखा इन्काउन्टर्स लिमिटेड र २०१० मा एफएनबी पब्लिसिङ लिमिटेड कम्पनीमा लगानी गरेका आइसिआइजेले जनाएको छ।
गोरखा इन्काउन्टर्सलाई पछि नाम परिवर्तन गरी 'द हिमालयन एडभेन्चर लिमिटेड' बनाइएको थियो। बजगाईले नेपालमा ट्याक्स हेवनको लगानीसमेत भित्र्याएका छन्।
उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सूचीअनुसार उनले अस्ट्रेलियन 'सिल्भर हेरिटेज' समूहसँग साझेदारी गरी तीन देशमा विभिन्न कम्पनी खोलेर नेपालमा लगानी ल्याएको देखिन्छ। बजगाईसँग साझेदारी गर्ने गरी लन्डनका नागरिक डेविड फ्र्याकेलले विभिन्न कम्पनीका लागि दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याएको खुलेको छ।
मंगेश र सञ्जीव
काठमाडौं ठेगाना उल्लेख मंगेशलाल श्रेष्ठले पनि विदेशमा लगानी गरेका छन्। आइसिआइजेले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मंगेशले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सन् २०१५ मा इन्सेसेन्ट रेन नामक फिल्म र एनिमेसनसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी दर्ता गरेको भेटिएको छ। त्यसमध्ये एक हुन् मंगेशलाल।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी मर्कन्टायल अफिस सिस्टम्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सञ्जीव राजभण्डारी र क्यालिफोर्निया निवासी किरणभक्त जोशीसमेत यो कम्पनीका लगानीकर्ता भएको जनाइएको छ। उनीहरूको ठेगाना बाँसबारी, काठमाडौं उल्लेख छ।
आइएमई ग्रुपका चन्द्रप्रसाद ढकाल
छोटो समयमै सबैमाझ चिनिएका व्यवसायी चन्द्र ढकालले बेलायतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय 'कम्पनिज हाउस' मा सन् २००२ अगस्ट ९ मा सनवर्ड कम्प्युटर कन्सल्ट्यान्टस लिमिटेड खरीद गरेको आइसिआइजेले जनाएको छ। उनले खरिद गरेको १२औं दिनमा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस (आइएमई) युके लिमिटेड बनाएका थिए।
यसमा ढकाल, उनका भाइ हेमराज, दुुई बेलायती र दुुई गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरेका छन्। गैरआवासीय नेपालीमा बेलायत बस्ने अनिलकुमार लामिछाने र कमल पौडेल हुन्।
सिंगापुर बस्ने नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले सन् २००० देखि २००७ सम्म ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डसमा विभिन्न चार कम्पनी दर्ता गरेको देखिन्छ। आचार्यले पासा होल्डिङ लिमिटेड, स्क्वायर स्टार इन्क, लासेल होल्डिङ इन्कर्पोरेटेड र लिडिङ फेथ इन्कर्पोरेटेड कम्पनी दर्ता गरेका छन्। लासेल कम्पनीमा लिडेनवर्ग लिमिटेडको पनि लगानी छ। सतिश आचार्यकी पत्नी भावनासिंह श्रेष्ठका नामबाट पनि विदेशमा लगानी भएको आइसिआइजेले उल्लेख गरेको छ।
सन् २०१५ मा उनको नाममा सिंगापुरमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएको बताइएको छ। सतिशको कारोबार क्याम्बोडियालगायतका विभिन्न मुलुकमा रहेको जनाइएको छ। क्याम्बोडियाको वाणिज्य मन्त्रालयको सूचीअनुसार राजबहादुर सिंह त्यहाँ दर्ता भएको लासेल प्राइभेट नामक कम्पनीका पनि मालिक हुन्।
होटल मल्लकी अध्यक्ष रमा मल्ल
राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरकी छोरी रमा मल्लले पनि बेलायतमा एक कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएको छ। 'कम्पनिज हाउस' बाट प्राप्त विवरणअनुसार लन्डनमा बसोबास गर्ने अमेरिकी नागरिक जोन मोरिसन एटवाटर र उनको संयुक्त लगानी छ। 'स्विस लिक्स' प्रकरणमा आइसिआइजेले दिएको जानकारीअनुसार स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्नेहरूको सूचीमा एटवाटरको पनि नाम थियो।
एटवाटर र मल्लको लगानीमा बेलायतमा सिक्स्टिन अप्पर ब्रुक स्ट्रिट लिमिटेड कम्पनी सञ्चालनमा छ। ३४ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको उक्त कम्पनीमा सन् २००४ देखि मल्लले लगानी गरेको देखिन्छ। रमा मल्ल 'होटल मल्ल' की अध्यक्ष हुन्। एक वर्षअघि उनले कर नतिरेको भन्दै नेपालमा सार्वजनिक सूचनासमेत जारी भएको थियो जनाइएको छ।
चिनी उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल
सरकारी निकायसमक्ष आफ्नो अनुकूलका एजेन्डाका लागि 'लबिङ' गर्न सक्ने शशिकान्त अग्रवाल चिनी उद्योगी हुन्। कहिले खेतान र कहिले अग्रवाल थर लेख्ने उनको पनि विदेशमा लगानी छ। आइसिआइजेले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार शशिकान्त र उनका भाइ सुमितको 'मल्टी लिंक ट्रेडिङ लिमिटेड' कम्पनी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डसमा छ। उनीहरूले सन् २००३ मा यो कम्पनी दर्ता गरेका हुन्।
व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै नाम नसुनिएका नेपालीहरूले समेत विदेशमा लगानी गरेको भेटिएको छ। जसमा नवाङ डोल्मा जोरपाटी–२, उमादेवी सिंघानिया, रिनुका प्रधान चुनदेवी–४ काठमाडौं, पुुनम प्रधान र अजयप्रसाद प्रधान, विमलकाजी ताम्राकार सिद्धिभवन कान्तिपथ, विश्ववरसिंह थापा, नवीन्द्र जोशी, विश्वधर तुलाधर, अरुण श्रेष्ठले विदेशमा लगानी गरेको आइसिआइजेले उल्लेख गरेको छ।
विनु श्रेष्ठ, किशोर राना, निर्मल श्रेष्ठ, श्याममिलन श्रेष्ठ, आशिष रौनियार, चिम्पाल रौनियार खुश्बु सरकारलगायत नेपालीले विदेशमा कम्पनी दर्ता गरी लगानी गरेको खुलासा भएको छ।
आइसिआइजेबाट प्राप्त विवरणहरूले विदेशमा पैसा राख्न विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरेको पनि भेटिएको छ। जसमा हरिशकुमार तोदी अग्रवाल, बिजेस तोदी र विन्दु तोदीको विदेशी लगानीबारेको विवरणबाट स्पष्ट भएको देखिन्छ।
सन् २००७ मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्मा उनीहरूका नाममा उडस्टक युनिभर्सल लिमिटेड नाम गरेको कम्पनी दर्ता भएको आइसिआइजेले जनाएको छ। यसमध्ये बिजेश र हरिशले विराटनगर–९ मोरङको ठेगाना उल्लेख गरी नेपाली राहदानी पेस गरेका थिए। साथै भारतस्थित हरियाणा ठेगाना उल्लेख भएकी विन्दु तोडी पनि यही कम्पनीको लगानीकर्ता हुन्।
हरिश र बिजेश नेपालमा नाम चलेका व्यवसायी हैनन्। खोजी गर्ने क्रममा यी दुुईको भारतमा पनि लगानी रहेको भेटिएको आइसिआइजेले जानकारी दिएको छ। बिन्दु तोदीको लगानी रहेको कम्पनीबारे अनुसन्धान गर्दा हरिश र बिजेश पनि भारतीय नागरिक भएको भेटियो।
उनीहरूले भारतीय नागरिक भएर 'जेड निड्स प्रालि' नामको कम्पनीमा लगानी गरेका रहेछन्। खेल सामग्री कारोबार गर्ने अर्को कम्पनी 'टि टेन स्पोर्टस्' पनि भारतमा उनीहरूकै नाममा दर्ता छ। कम्पनीको वेबपेजमा दिइएको जानकारीअनुसार यो कम्पनीले अहिले नेपाली क्रिकेट टोलीका लागि जर्सीसमेत आपूर्ति गर्दै आएको छ।